ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးဆိုငျရာ စာခြုပျခြုပျဆိုရာတှငျ အဓိကကတြဲ့ စာခြုပျအမြိုးအစားမြား - Myanmar Builders Guide
ခတျေမှီတိုးတကျလာတာနဲ့အမြှ ဆောကျလုပျရေးနှငျ့ဆိုငျသော ပညာရပျတှကေလညျး တဖွညျးဖွညျးတိုးတကျလာပွီးတော့ ပွောငျးလဲလာပါတယျ။ ယခုခတျေ တိုးတကျမှုနှငျ့ ယှဉျပွိုငျမှုတှကွေားမှာ တရားဝငျခိုငျမာမှု မရှိတဲ့ လုပျငနျးတှကေ ရပျတညျဖို့ ခကျခဲလာပါတယျ။
တကယျလို့ အဆောကျအအုံတဈခု ဆောကျတော့မယျဆိုလြှငျ တိကဖြို့နှငျ့ စနဈတကြ လုပျဆောငျနိုငျဖို့ကလညျး အလှနျ အရေးကွီးပါတယျ။ ဖွဈနိုငျမယျဆိုလြှငျ လှဲခြျောမှု မရှိအောငျ ဆုံးရှုံးမှု နညျးပါးအောငျ ကွိုတငျကာကှယျတာတှေ လုပျထားဖို့ လိုပါတယျ။
ဆောကျလုပျရေးတဈခုကို လုပျတော့မယျဆိုလြှငျ လုပျထုံးလုပျနညျးအရ အငွငျးပှားမှု၊ ပိုငျဆိုငျမှု၊ လုပျပိုငျခှငျ့ စတာတှကေို သတျမှတျဖို့၊ ထိနျးခြုပျဖို့ သကျဆိုငျရာနယျပယျအတှကျ အထူးပွုလုပျထားတဲ့ စာခြုပျတှကေို ခြုပျဆိုရပါတယျ။
ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးဆိုငျရာ စာခြုပျခြုပျဆိုရတဲ့နရောမှာ စာခြုပျမြားစှာ ရှိတဲ့အထဲကမှ အဓိကကတြဲ့ စာခြုပျအမြိုးအစား တခြို့ကို ဖျောပွပေးသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
- ဆောကျလုပျပွီး/ မဆောကျလုပျခငျက ရောငျးခထြားသော အခနျးမြားအတှကျ ဝယျသူနဲ့ ကနျထရိုကျတာ အကွားက စာခြုပျ
- ပစ်စညျးပေးသှငျးသူနဲ့ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးရှငျကွားက စာခြုပျ စသဖွငျ့ ရှိကွပါတယျ။ ဒီလိုစာခြုပျတှမှော ဘယျလိုအရာတှပေါမလဲ၊ ဘာတှေ သိထားသငျ့လဲဆိုတာကိုတော့ အောကျမှာ လလေ့ာကွညျ့လိုကျရအောငျပါ။
- ပစ်စညျးပေးသှငျးသူနဲ့ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးရှငျကွားက စာခြုပျ စသဖွငျ့ ရှိကွပါတယျ။ ဒီလိုစာခြုပျတှမှော ဘယျလိုအရာတှပေါမလဲ၊ဘာတှေ သိထားသငျ့လဲဆိုတာကိုတော့ အောကျမှာ လလေ့ာကွညျ့လိုကျရအောငျပါ။
2. Full Name, Address, License and Signatures of Both Parties
ဒီတဈခုကတော့ တခြိနျခြိနျမှာ လိုအပျလာနိုငျပါတယျ။ ကိုယျ စာခြုပျခြုပျပွီး တှဲလုပျသူဟာ တရားဝငျ ဖွဈတယျဆိုရငျတော့ ကိစ်စမရှိပမေယျ့ ဆနျ့ကငျြဘကျဆိုရငျတော့ နငျဘယျသူလဲ ငါဘယျသူလဲနဲ့ အမွတျထုတျ ခံသှားရပါလိမျ့မယျ။ အစတညျးက လိုအပျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ ယူထားတာကလညျး မမှားတော့ဘူးပေါ့။ ခငျလို့ဖွဈတဲ့ ယုံကွညျမှုနဲ့တော့ စီးပှားလုပျငနျးကို သှားရောထှေးလိုကျတာမြိုး လုပျလို့တော့ မရပါဘူး။
7. Recovery Fund Disclosure
8. Disputes & Termination
ဒီမှာကတော့ ကိုယျနဲ့ ဒီလုပျငနျး ပါဝငျပတျသတျသူတှေ ကွားမှာ အငွငျးပှားစရာ ပွဿနာတှေ ဖွဈလာခဲ့ရငျ ဘယျလို ဖွရှေငျးမှုမြိုးကို ခံယူပါ့မယျဆိုတဲ့ကွောငျး ဖျောပွထားရပါမယျ။ အဲ့ဒီအတှကျလညျး အထကျမှာ ဖျောပွခဲ့တဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ လုပျရထားမှာပါ။ law firm အဖှဲ့ တဈခုခုရဲ့ ဥပဒအေကွံပွုခကျြနဲ့ ကွားဝငျ ဖွနျဖွမှေုတဈခုခုကို စတငျ ရယူတာမြိုးလား။ အဲလိုမှ အဆငျမပွသေေးရငျ ခုံသမာဓိ အဖှဲ့ တဈခုခုရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ကွားနာပါ့မယျ ဆိုတာမြိုးလား။
ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးတိုငျးမှာ ကနျထရိုကျတာဘကျက ကိုယျ့အလုပျသမားတှအေတှကျ လုပျငနျးဆိုငျရာ လြျောကွေး၊ နဈနာကွေး စတာတှကေို သခြော အာမခံထားသငျ့ပါတယျ။ ဒီလို ရှိထားမှသာ ထိခိုကျ ဒဏျရာရတဲ့အခါမှာ Owner အနနေဲ့ သခြော ဖွရှေငျးလို့ရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလောကျဆိုရငျတော့ construction contract တဈခုမှာ မဖွဈမနေ ပါဝငျသငျ့တဲ့ အခွခေံတှကေို လလေ့ာမိလောကျမယျ ထငျပါတယျ။
source from Phoe Phyu & Associates Law Firm
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် အဓိကကျတဲ့ စာချုပ်အမျိုးအစားများ
ခေတ်မှီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဆိုင်သော ပညာရပ်တွေကလည်း တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပြီးတော့ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ယခုခေတ် တိုးတက်မှုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကြားမှာ တရားဝင်ခိုင်မာမှု မရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲလာပါတယ်။
တကယ်လို့ အဆောက်အအုံတစ်ခု ဆောက်တော့မယ်ဆိုလျှင် တိကျဖို့နှင့် စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကလည်း အလွန် အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလျှင် လွဲချော်မှု မရှိအောင် ဆုံးရှုံးမှု နည်းပါးအောင် ကြိုတင်ကာကွယ်တာတွေ လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးတစ်ခုကို လုပ်တော့မယ်ဆိုလျှင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ အငြင်းပွားမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် စတာတွေကို သတ်မှတ်ဖို့၊ ထိန်းချုပ်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတွက် အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်တွေကို ချုပ်ဆိုရပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရတဲ့နေရာမှာ စာချုပ်များစွာ ရှိတဲ့အထဲကမှ အဓိကကျတဲ့ စာချုပ်အမျိုးအစား တချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဆောက်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ မြေရှင်တို့ကြားက စာချုပ်၊
- ဆောက်လုပ်ပြီး/ မဆောက်လုပ်ခင်က ရောင်းချထားသော အခန်းများအတွက် ဝယ်သူနဲ့ ကန်ထရိုက်တာ အကြားက စာချုပ်၊
- သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေက စည်ပင်ခွင့်ပြုချက်ဆိုင်ရာ စာချုပ်
- Constructor နဲ့ Subconstructor တို့ကြားက စာချုပ် (ပန်းရံ၊ လက်သမား၊ ဆေးသုပ်၊ လျှပ်စစ်သွယ်၊ အလှဆင် စတဲ့ အလုပ်တစ်ခုချင်းအတွက် subconstructor တွေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်အကြားက စာချုပ်)
- ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြားက စာချုပ် စသဖြင့် ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုစာချုပ်တွေမှာ ဘယ်လိုအရာတွေပါမလဲ၊ ဘာတွေ သိထားသင့်လဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
- ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြားက စာချုပ် စသဖြင့် ရှိကြပါတယ်။ ဒီလိုစာချုပ်တွေမှာ ဘယ်လိုအရာတွေပါမလဲ၊ဘာတွေ သိထားသင့်လဲဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။
Construction contract ရဲ့အဓိက element
လို့တောင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းမှာပါဝင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေအပြင် အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်း၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်အတန်း၊ အလုပ်အချိန်ဇယားတွေ စတာတွေကို အသေးစိတ် ပါဝင်ရပါတယ်။
ဒီတစ်ခုကတော့ တချိန်ချိန်မှာ လိုအပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ် စာချုပ်ချုပ်ပြီး တွဲလုပ်သူဟာ တရားဝင် ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်တော့ နင်ဘယ်သူလဲ ငါဘယ်သူလဲနဲ့ အမြတ်ထုတ် ခံသွားရပါလိမ့်မယ်။ အစတည်းက လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ ယူထားတာကလည်း မမှားတော့ဘူးပေါ့။ ခင်လို့ဖြစ်တဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့တော့ စီးပွားလုပ်ငန်းကို သွားရောထွေးလိုက်တာမျိုး လုပ်လို့တော့ မရပါဘူး။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာ ငွေကြေးဆိုတာ ထိပ်ဆုံးကနေ အရေးပါဆုံးအရာအဖြစ် နေရာယူထားတဲ့ အချက်တစ်ခုလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ Area မှာ ဆောက်လုပ်နေတဲ့ Project က ဘယ်လောက် ကုန်ကျမယ်၊ ဘယ်ချိန်တွေမှာ ငွေပေးချေမှု ပြုလုပ်ရမယ် စတဲ့ ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားရပါမယ်။ ပရောဂျက် တဝက်တပြတ်ကြီးနဲ့ ငွေပေးချေမှု ရပ်တန့်သွားတဲ့အဖြစ်ကို ဘယ်သူမှ မကြုံချင်ကြပါဘူး။
Project စတင်မယ့်ရက်၊ လုံလောက်တဲ့ အချိန်အပိုင်းအခြားကို တိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီး ပြီးဆုံးမယ့်ရက် ဒါမှမဟုတ် အချိန်ကာလကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပြီး ထားဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးမှ တကယ်နောက်မကျပါပဲ စာချုပ်စာတမ်း အကြောင်းအရာကို မစိစစ်မိတဲ့ မှားယွင်းမှုကြောင့် နောက်ကျသလို ဖြစ်သွားရင် လျော်ရမယ့်ကိစ္စက မိအေး ၂ခါနာမယ့် အဖြစ်မျိုး ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပရောဂျက်က ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အရာတွေကလည်း ပိုပြီး ရှုပ်ထွေး များပြားလာတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားထဲကနေ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် လုပ်ငန်း တာဝန်တွေကို လုပ်ဆောင်မယ့်သူဟာ ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပါ ထည့်သွင်း ရေးသားရမှာပါ။
ငွေပေးချေဖို့ နောက်ကျတာ၊ တချို့သော စည်းကမ်းချက်တွေကို ချိုးဖောက်ရင် လျော်ကြေး၊ ဒဏ်ငွေ ပေးဆောင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း ဖော်ပြထားဖို့လိုပါတယ်။
ကန်ထရိုက်တာရဲ့ ဥပဒေမဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် ပရောဂျက် ပြီးဆုံးသွားသည့်တိုင် ရလာဒ်က ရှုံးနေတယ်ဆိုရင်တောင် ကိုယ်ရသင့်တဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေ ဘယ်လို ရှိတယ်ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်း ဖော်ပြထားရမှာပါ။ ဒါကတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း စာချုပ်အများစုမှာ ပါကို ပါသင့်ပါတယ်။
ဒီမှာကတော့ ကိုယ်နဲ့ ဒီလုပ်ငန်း ပါဝင်ပတ်သတ်သူတွေ ကြားမှာ အငြင်းပွားစရာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လို ဖြေရှင်းမှုမျိုးကို ခံယူပါ့မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားရပါမယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုပ်ရထားမှာပါ။ law firm အဖွဲ့ တစ်ခုခုရဲ့ ဥပဒေအကြံပြုချက်နဲ့ ကြားဝင် ဖြန်ဖြေမှုတစ်ခုခုကို စတင် ရယူတာမျိုးလား။ အဲလိုမှ အဆင်မပြေသေးရင် ခုံသမာဓိ အဖွဲ့ တစ်ခုခုရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြားနာပါ့မယ် ဆိုတာမျိုးလား။
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ကန်ထရိုက်တာဘက်က ကိုယ့်အလုပ်သမားတွေအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လျော်ကြေး၊ နစ်နာကြေး စတာတွေကို သေချာ အာမခံထားသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ရှိထားမှသာ ထိခိုက် ဒဏ်ရာရတဲ့အခါမှာ Owner အနေနဲ့ သေချာ ဖြေရှင်းလို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကန်ထရိုက်တာတွေအနေနဲ့ ရှေရှည်ကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို အာမခံဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို အသုံးပြုရမယ်ဆိုပြီး သေသေချာချာ စီစဉ်ထားသင့်ပါတယ်။ အချုပ်အားဖြင့် Warranty သုံးနှစ်တာ ကာလအတွင်းမှာ စာချုပ်ထဲက ကတိကဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်ရင် ကိုယ်ရသင့်ရထိုက်တာတွေကို ကန့်သတ်ထားလား၊ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိလား ဆိုတာကိုလည်း ဝေခွဲထားရပါမယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ construction contract တစ်ခုမှာ မဖြစ်မနေ ပါဝင်သင့်တဲ့ အခြေခံတွေကို လေ့လာမိလောက်မယ် ထင်ပါတယ်။
Read 894 times	Last modified on Tuesday, 07 January 2020 09:47